Al-shabaab oo xaqiijiyey in askerigii Faransiiska ahaa ee dhaawacmey uu dhintey - Horseed Media
Al-shabaab oo xaqiijiyey in askerigii Faransiiska ahaa ee dhaawacmey uu dhintey January 14, 2013 Share this:FacebookTwitterGoogleAskerigii u dhashey dalka Faransiiska ee ku dhaawacmey hawlgalkii fashilmey ee lagu soo badbaadinayey Denis Allex, ayaa u dhintey dhaawicii soo gaarey saacado kadib sidaas waxaa sheegay afhayeen u hadley xarakada al-Shabaab.
“Askerigii Faransiiska ahaa kaas oo qayb ka ahaa duulaanka Soomaaliya lagu soo qaadey waa dhintey waxaana uu u dhintey dhaawac soo gaarey” sidaas waxaa AFP u sheegay Cabdulcasiis Abu-muscab.
Al-shabaab ayaa sidoo kale sheegay in askeriga dhaawaca ay ku qabteen oo dhintey iyo mid kale oo hawlgalkaas uga dhintey Faransiiska ay dhawaan soo bandhigi doonaan. War-saxaaafdaeed qaybta warfaafinta ee al-Shabaab ay ku faafiyeen barta ay ku leeyihiin Twitterka ayey ku xaqiijiyeen dhimashada askerigaas, waxaana war-saxaafadeedka lagu yiri Faransiisku kuma fashilmin sii deynta Denis Allex laakiin fashilka guuldarro soo gaartey ayaa u dheer, askeri ay dhaawac ahaanta uga tageen ee dhintey ayey ku tilmaameen in uu ahaa ninkii hoggaaminayey hawlgalka. al-Shabaab ayaa sheegay in ay geeyeen askerigaas dhaawac ahaanta ay ku qabteen goob Isbitaal ah halkaasna uu ku dhintey, saacado kadib markii weerarku dhacay.
Isla war-saxaafadeedka al-Shabaab ka soo baxay ayey mar kale ku sheegeen in maanta kulan laga qaadanayo xaaladda Denis Allex iyo mustaqbalkisa isla markaana la soo daabici doono saacadaha soo socda, faransiiska ayaa kua dkeysanaya in uu dhintey Denis Allex, waxaana dad badan oo ka faallooda arrimaha ururada mayalka adag sheegayaan in aan Denis Allex nooleyn, ee waxa ay soo bandhigayaan tahay in ay xukun dil ah ku fuliyeen.
Warsaxaafadeedka al-Shabaab ayey ku sheegeen in ay dagaalkaas ku qabsadeen hub iyo qalab kale oo milateri.
Faransiiska ayaa horey u qirtey in mid kamid ah Askartooda uu ku dhintey hawlgalkaas halka mid kalena ala waayey, waxaase mar danbe ay sheegeen in uu dhintey, Dhamaan ciidamada hawlgalka fuliyey ayaa xirnaa qalab lagu ogaanayo halka ay joogaan haddii ay dhumaan ama khatar galaan kaas oo aanu askerigu shidin waana sababta lagu ogaadey in uu dhintey ayuu yiri mid kamid ah askarta Faransiiska oo aan magciisa la shaacin kaas oo waraysigiisa lagu daabacay Joornaalka le Point. al-Shabaab ayaa maalintii Sabtida (12/01/2013) sheegay in ay hayaan askeriga maqan oo dhawac ah isla markaana uu xiran yahay.
Dhanka kale al-Shabaab ayaan weli soo bandhigin ama ka hadlin xaaladda dhabta ah ee Denis Allex oo ay sheegeen in uu nool yahay, halka faransiisku kua dkeysanayo in ay dileen kuwii haystey Mr.Allex.
Hawlgalka lagu soo furnayey Denis Allex ee ka dhacay Buulo-mareer ayaa fashil ku dhamaadey waxaana ka qaybqaatey 50 ciidamada komaandooska Faransiiska ah iyo 6 diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca, iyada oo Maraykanku gacan ka geystey.